Izindaba - Filter Press Operation Procedure
(1) Ukuhlola kwangaphambi kokuhlunga
1. Ngaphambi kokusebenza, hlola ukuthi ingabe amapayipi okungena nawokungena, noma ngabe ukuxhumeka kuyavuza noma kuvinjelwe, ukuthi ipayipi lokuhlunga ipuleti lokucindezela ipuleti nendwangu yokuhlunga kugcinwa kuhlanzekile, nokuthi iphampu lokungena kuketshezi namaphayiphu kuvamile yini.
2. Hlola ukuthi izingxenye zokuxhuma, amabhawodi namantongomane kozimele zikhululekile, futhi azolungiswa futhi aqiniswe nganoma yisiphi isikhathi. Izingxenye ezihamba ngokuqhathaniswa kufanele zigcinwe zigcotshwe kahle njalo. Hlola ukuthi ngabe uwoyela we-reducer kanye nendebe kawoyela we-nut usendaweni nokuthi imoto ikwindlela ejwayelekile yokuhlehlisa.
(2) Lungiselela ukuhlunga
1. Vula ukunikezwa kwamandla kwangaphandle, cindezela inkinobho yekhabethe likagesi ukubuyisela emuva imoto, ubuyisele ipuleti eliphakathi nendawo endaweni efanele, bese ucindezela inkinobho yokumisa.
2.Hang indwangu yokuhlunga ehlanzekile ezinhlangothini zombili zepuleti lokuhlunga bese uvumelanisa izimbobo ezibonakalayo. Indwangu yokuhlunga kufanele ibe nkulu kunendawo ebekwa uphawu kwepuleti lokuhlunga, umgodi wendwangu awuzukuba mkhulu kunomgodi wepayipi, futhi ukushelelisa akufanele kusongwe ukugwema ukuvuza ebusuku. Uhlaka lwamapuleti kufanele luqondaniswe futhi ukulandelana kwamapuleti okuhlunga okuhlanza ngeke kubekwe endaweni engeyiyo.
3. Cindezela inkinobho yokujika phambili ebhokisini lokusebenza ukwenza ipuleti maphakathi nophahla ucindezele ipuleti yesihlungi ngokuqinile, bese ucindezela inkinobho yokumisa lapho kufinyelelwa umfutho othile wamanje.
1. Vula i-valve yefiltrate outlet, qala iphampu yokuphakelayo bese uvule kancane kancane i-valve yokuphakela ukuze ulungise i-valve ebuyayo. Ngokuya ngomfutho wejubane lokuhlunga, ingcindezi iyakhula kancane kancane, imvamisa ayinkulu kune. Ekuqaleni, i-filtrate ivame ukuba ne-turbid bese iyavalwa. Uma kunokuvuza okukhulu phakathi kwamapuleti wokuhlunga, amandla e-jacking ophahleni oluphakathi angakhuphuka ngokufanele. Kodwa-ke, ngenxa yesimo se-capillary sendwangu yokuhlunga, kusekhona inani elincane le-filtrate exudation, okuyinto ejwayelekile, engagcinwa ngumcengezi osekelayo.
2. Qapha i-filtrate. Uma kutholakala i-turbidity, uhlobo lokugeleza oluvulekile lungavala i-valve bese luqhubeka nokuhlunga. Uma ukugeleza okufihliwe kumisiwe, shintsha indwangu yokuhlunga eyonakele. Lapho uketshezi lwezinto luhlungwa noma i-slag yesihlungi kufreyimu igcwele, kungukuphela kokuhlunga okuyinhloko.
(4) Ukuphela kwesihlungi
1. Misa iphampu yokuphakela bese uvala i-valve yokuphakelayo.
2. Cindezela inkinobho yokubuyisela emuva emotweni ukuhlehlisa ipuleti lokucindezela ngesikhathi sokukhishwa kwekhekhe.
3. Susa ikhekhe lokuhlunga bese ugeza indwangu yokuhlunga, ipuleti lokuhlunga nefreyimu yokuhlunga, uzibeke ukuze uvikele ukusonteka kohlaka lwepuleti. Ingafakwa futhi kumshini wokuhlunga ngokulandelana bese ucindezelwa uvalwe ngocwecwe lokucindezela ukuvimbela ukusonteka. Geza isiza bese uhlikihla i-rack, gcina ifreyimu nesayithi lihlanzekile, unqamule ugesi wangaphandle, futhi wonke umsebenzi wokuhlunga usuphelile.
Izinqubo zokusebenza zomshini wokuhlunga
Inombolo yamapuleti wokuhlunga ekucindezelweni kwesihlungi kukho konke ukucaciswa ayizukuba ngaphansi kwaleyo ebalulwe kupuleti legama, futhi ingcindezi yokucindezela, ingcindezi yokuphakelayo, ingcindezi yokucindezela kanye nezinga lokushisa lokuphakelayo akumele kudlule ubukhulu obucacisiwe kusibaluli. Uma indwangu yokuhlunga ilimele, shintsha uwoyela wokubacindezela ngesikhathi. Ngokuvamile, uwoyela wokubacindezela uzobuyiselwa kanye engxenyeni yesibili yonyaka. Emvelweni onothuli, izobuyiselwa kanye ezinyangeni ezi-1-3 futhi zonke izinto ezibacindezela njenge-oyili silinda nethangi lika-oyela kufanele zihlanzwe kanye.
I-2.Induku yesikulufa, isikulufa se-nut, ukuthwala, ikamelo le-shaft kanye ne-hydraulic mechanical pulley shaft ye-mechanical filter press izogcwaliswa ngamafutha we-2-3 wokugcoba uketshezi njalo lapho kuhamba. Akuvunyelwe nhlobo ukufaka i-calcium grease eyomile endlebeni yesikulufu, futhi akuvunyelwe ukuqala isenzo sokucindezela futhi ngaphansi kombuso ocindezelayo, futhi akuvunyelwe nakancane ukulungisa imingcele yokudluliselwa kagesi ngokuthanda.
Ngesikhathi sokusebenza komshini wokuhlunga wokubacindezela, abasebenzi banqatshelwe ukuhlala noma ukudlula ngemuva kokuthi isilinda sisebenza. Lapho ucindezela noma ubuya, abasebenzi kufanele bagcinwe begadile lo msebenzi. Zonke izingxenye ze-hydraulic ngeke zilungiswe ngokuthanda ukuvimbela ukulimala kwemishini noma ukuphepha komuntu okubangelwa ingcindezi engalawulwa.
4.Indawo yokubekwa uphawu kwepuleti yesihlungi kufanele ihlanzeke futhi ingabi nezibaya. Ipuleti lokuhlunga lizoba mpo futhi licoceke ngogongolo olukhulu. Akuvunyelwe ukuthambekela ngaphambili nangemuva, ngaphandle kwalokho, isenzo sokucindezela ngeke siqaliswe. Akuvunyelwe neze ukunweba ikhanda nesitho ku-plate yokuhlunga ngesikhathi senqubo yokukhipha ipuleti yokudonsa. Umoya oyisilinda kufanele ukhishwe.
5.Zonke izimboni zokuphakela ipuleti lokuhlunga kufanele zihlanzwe ukugwema ukuvimba nokulimaza ipuleti lokuhlunga. Indwangu yokuhlunga kufanele ihlanzwe ngesikhathi.
6.Ibhokisi lokulawula ugesi lizogcinwa lomile, futhi zonke izinhlobo zezinto ezisebenza ngogesi ngeke zigezwe ngamanzi. Isihlungi sokucindezela kufanele sibe nocingo lomhlabathi ukuvimbela ukujikeleza okufishane nokuvuza.
Ukugcinwa nokunakekelwa kwemishini
Ukuze usebenzise kangcono futhi uphathe umshini wokuhlunga woqweqwe lwensimbi, uthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo futhi wandise impilo yensiza yemishini, ukugcinwa kwansuku zonke nokugcinwa komshini wokucwenga wohlaka lwensimbi kuyisixhumanisi esibalulekile, ngakho-ke amaphuzu alandelayo kufanele enziwe :
1.Hlola ukuthi izingxenye zokuxhuma zepuleti lokucwenga lohlaka lwensimbi zikhululekile njalo, bese uziqinisa futhi uzilungise ngesikhathi.
Indwangu yokuhlunga yomcengezi wesihlungi sepuleti kufanele ihlanzwe futhi ifakwe enye njalo. Ngemuva komsebenzi, izinsalela ziyohlanzwa ngesikhathi esifanele, futhi ibhlokhi ngeke lomiswe kuhlaka lwengcwecwe ukuvimbela ukuvuza uma liphinde lisetshenziswa. Hlanza umucu wamanzi bese ukhipha imbobo kaningi ukuze uwugcine ubushelelezi.
Uwoyela noma uwoyela wokubacindezela wepuleti lokucwenga uzimele uzoguqulwa kaningi, futhi izingxenye ezijikelezayo zizogcotshwa kahle.
4. Umshini wokuhlunga ngeke uvalwe ngamafutha isikhathi eside. Uhlaka lwamapuleti luzobekwa endaweni yokugcina izimpahla engenawo umoya futhi yomile enokuphakama kokubeka okungaphezu kwe-2m ukuvimbela ukugoba nokuchaka.